एक सातामा नेप्से परिसूचक १६५.२८ अंकले वृद्धि | Ratopati
मङ्गलबार ४ माघ, २०७८ Tuesday, 18 January, 2022
एक सातामा नेप्से परिसूचक १६५.२८ अंकले वृद्धि
पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक १६५.२८ अंकले वृद्धि भएको छ । गत साताको विहिबार अन्तिम कारोबारको दिन परिसूचक ४३.२९ अंकले बढेर २ हजार ६९२.४७ विन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो ।यो साताको पाँचै दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक चार दिन बजार उकालो लाग्दा एक दिने भने गिरावट आएको छ । यो साताको पाँच दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक १६५.२८ अंकले भएर २ हजार ८५७.७५ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ ।
अघिल्लो साता १६७.९७ अंकले बढेको नेप्से परिसूचक यो साता १६५.२८ अंकले बढेको हो । तर, गत साताको भन्दा यो साता नेप्से परिसूचक २ अंकले गिरावट आएको छ । पछिल्लो चार महिना देखि निरन्तर रुपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक पछिल्लो दुई सातादेखि निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको छ ।
साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च अंकले वृद्धि भएको थियो । जुन दिन नेप्से परिसूचक परिसूचक ७३.०१ अंक बढेर २७६५.४७ विन्दुमा पुगेको थियो । त्यस्तै , ठूला कम्पनीको मूल्य मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स १३.२१ अंक बढेको थियो भने फ्लोट इण्डेक्स ५.०७ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ४.५६ अंक बढेको थियो । आइतबार कारोबारमा आएका २३९ कम्पनीको १ करोड ५० लाख ५८ हजार कित्ता शेयर ७ अर्ब १० करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै, साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि नेप्से परिसूचक वृद्धिमा निरन्तरता पाएको थियो । उक्त दिन नेप्से परिसूचक १९.४३ अंक बढेर २ हजार ७८४.९५ विन्दुमा पुगेको थियो । सोमबारको कारोबारमा आएका २३६ कम्पनीको १ करोड ४२ लाख ८८ हजार कित्ता शेयर ७ अर्ब १२ करोड ३४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
मंगलबार पनि नेप्से परिसूचक ४९.१९ अंकले बढेर २ हजार ८३४.१३ विन्दुमा पुगेको थियो । । त्यस्तै, यस दिन ठूला कम्पनी मूल्य मापक सेन्सेटिभ इण्डेक्स ६.३४ अंक बढेको थियो भने फ्लोट इण्डेक्स ३.६२ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स पनि २.२४ अंक बढेको थियो मंगलबार कारोबारमा आएका २३२ कम्पनीको १ करोड १९ लाख ७० हजार कित्ता शेयर ६ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
तर, बुधबार भने सातामा तीन दिनको कारोबारमा निरन्तर उकालो लागिरहेको नेप्सेमा ३०.५१ अंक घटेर २८०३.६२ विन्दुमा झरेको थियो । त्यस्तै, सेन्सेटिभ इण्डेक्स ७.०४ अंक, फ्लोट इण्डेक्स १.८६ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स २.१७ अंक घटेको थियो । बुधबार कारोबारमा आएका २२९ कम्पनीको १ करोड ६१ लाख ४७ हजार कित्ता शेयर ८ अर्ब ३ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्से घटेपनि बुधबारको कारोबार रकम भने ८ अर्ब माथि नाघेको थियो ।
त्यस्तै,साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार भने बजार बढेको छ । विहिबार नेप्से परिसूचक ५४.१२ अंक बढेर २ हजार ८५७.७५ विन्दुमा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको मूल्य मापक सेन्सेटिभ इण्डेक्स पनि ८.९४ अंक बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स ४.०९ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ३.३४ अंकले बढेको छ । विहिबार कारोबारमा आएका २२४ कम्पनीको १ करोड १८ लाख ३४ हजार कित्ता शेयर ६ अर्ब ६६ करोड ९७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पतिमा पनि वृद्धि भएको छ । गतसाता २ खर्ब ३६ अर्ब २ करोड रुपैयाँले बढेको लगानीकर्ताको सम्पती यो साता २ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत बिहीबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पूँजीकरण कुल ३८ खर्ब ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो साता २ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सम्पती बढेर ४० खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
किसान लघुवित्तले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
गण्डकी प्रदेश भित्र ३० वटा ‘होमस्टे परियोजना’का लागि छनोट, एउटाले १० लाख पाउने
‘व्यवसायिक सुरक्षा गर्न सुनचाँदी व्यवसायी एक जुट हुनुपर्ने’
आज कुन तरकारीको मूल्य कति छ ? (मूल्यसूची)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीएसआरको ६० प्रतिशत पैसा आर्थिक वर्षभित्रै खर्च गर्नुपर्ने
सुन तोलामा एक सय रुपैयाँले बढ्यो
पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दियो २०७९ का लागि १४ पात्रोलाई स्वीकृति
हास्य सिरियल ‘अब जे होला होला’ ल्याउँदै उत्तम
गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो
महिनावारी पर सार्ने औषधी कतै तपाईं पनि खानुहुन्न ? विज्ञले सुझाएका कुरा बुझ्नुहोस्
कैलालीको गोदावरी पुलबाट खसेर शिक्षकको मृत्यु
‘आत्मरक्षा’का लागि बेलायतले युक्रेनलाई हतियार पठाउँदै
भारतमा कोभिड : पछिल्लो २४ घन्टामा ३८५ जनाको मृत्यु